”Waxaan qabannay shabakad dhan oo taabacsan TPLF!” – Booliiska Gobolka Soomaalida | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan qabannay shabakad dhan oo taabacsan TPLF!” – Booliiska Gobolka Soomaalida
”Waxaan qabannay shabakad dhan oo taabacsan TPLF!” – Booliiska Gobolka Soomaalida
(Jigjiga) 17 Agoosto 2021 – Booliiska Gobolka Soomaalida ee haatan hoos taga Ethiopia ayaa maanta sheegay inay heleen ”shabakad ka kooban siyaasiyiin iyo canaasiir taabacsan kooxda TPLF,” xilli uu dagaal ka socda Gobolka Tigraay kusii faafayo dalka intiisa kale.
Sida ku cad war kasoo baxay Maamulka Gobolka, waxaa shakhsiyaadkan ka tirsan jabadda Tigreega ee TPLF, oo urur argagixiso ahaan ugu astaysan DF Itoobiya, laga soo qabtay meelo ay ku dhumaalaysanayeen, kaddib markii qish laga helay dadwaynaha.
Shakhsiyaadkan ayaa la rumaysan yahay inay xulufo dhow la ahaayeen MW hore ee Maamulka Gobolka Soomaalida, Cabdi Ileey, waxayna qorshaynayeen inay wiiqaan amaanka gobolka, sida ay Booliisku sheegeen.
Booliiska ayaa sidoo kale raggan la xiriiriyey isku dhacyadii ugu dambeeyey ee ka dhex dhacay Soomaalida iyo Oromada.
Previous articleCAWAD: ”Cudurka Covid-19 uma eka mid muddo dhow ku dhamaan doona marka waa in…”
Next articleSu’aalo fiqi ah oo ka dhalanaya xukunka ay dadka qaarkii ku deg degayaan ee ah ”nin xaaskiisa kufsanaya!”